Smashwords – Ilay Hazo Sy Ny Asa Fanompoanao – a book by Dag Heward-Mills
Ilay Hazo Sy Ny Asa Fanompoanao
Maro amintsika no tsy mahatakatra ny fomba fifandraisan' ny tantaran' ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao anaty Baiboly amintsika. Mihevitra isika fa trangan-javatra mampalahelo nahavoa an' i Adama sy Eva izany ary hoe isika efa nandositra izany. Efa nandositra niala tamin' ny hazon' ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy marina ve isika? More
Maro amintsika no tsy mahatakatra ny fomba fifandraisan' ny tantaran' ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao anaty Baiboly amintsika. Mihevitra isika fa trangan-javatra mampalahelo nahavoa an' i Adama sy Eva izany ary hoe isika efa nandositra izany. Efa nandositra niala tamin' ny hazon' ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy marina ve isika? Ao amin' ity boky tsotra ity, no hahitanao fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia mbola misy ankehitriny. Ho hitanao ihany koa fa manolotra fakampanahy amintsika toy ny nataony teo amin' i Adama sy Eva ilay izy. Ho hitanao ihany koa ireo marina izay hanampy anao hamakivaky ny fiainana sy ny asa fanompoana amin'ny fampiasana ny fahalalana azonao ao anatin' ity boky ity.